Fomba 5 hanamafisana ny fizotrany nefa tsy hanelingelina ny fahaiza-mamorona | Martech Zone
Fomba 5 hanamafisana ny fizotrany nefa tsy misy fanatsarana ny fahaiza-mamorona
Talata, Febroary 11, 2020 Alatsinainy 10 Febroary 2020 Heidi Melin
Ny mpivarotra sy ny créative dia afaka mahazo skittish kely rehefa tonga ny resaka dingana. Tsy tokony hahagaga izany. Rehefa dinihina tokoa, manakarama azy ireo isika noho ny fahafahany ho lasa tany am-boalohany, sary an-tsaina, ary na dia tsy mahazatra aza. Tianay izy ireo hieritreritra an-kalalahana, hiala amin'ny lalana voasedra, ary hanangana marika manavao izay miavaka amin'ny tsena feno olona.
Tsy afaka mihodina isika avy eo ary manantena fa ny mpamorona antsika dia ho mpanara-dalàna voarindra sy mifototra amin'ny dingana izay tsy afaka miandry ny famakafakana ireo nuansa amin'ny fizotran'ny asa mahomby.
Fa na dia ny olona malalaka indrindra eto amintsika aza dia tsy maintsy miaiky fa rehefa malemy na tsy misy ny fizotrany dia manjaka ny korontana, ary tsy tsara izany ho an'ny famoronana famoronana.
Ao amin'ny tontolo iray andanian'ny mpiasa fahalalana antonony 57% amin'ny fotoanany on rehetra fa ny asa nanakaramana azy ireo hatao, ny fametrahana ny karazana rafitra mety amin'ny toerana dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay. Io no fomba tokana hitazonana ny pandemonium ary hahafahan'ny tsirairay manao ny asany tsara indrindra.
Ireto misy fomba dimy hanamafisana ny fomba ahafahana mamerina ny fotoana ahazoana valisoa, asa famoronana izay mifanaraka amin'ny tanjona stratejika lehibe indrindra an'ny orinasa.
1. Mialà sasatra momba izany
Mpankafy fatratra ny fomba fiasa “fihoaram-pefy” nataon'i Kelsey Brogan aho. Amin'ny maha talen'ny fitantanana programa mitambatra ao amin'ny T-Mobile, Kelsey dia te-hanaporofo amin'ny olona fa ny fiasan-dàlana voarafitra dia tsy tokony ho hentitra.
Betsaka ny olona tsy tia ny teny hoe 'process' - na ny hevitra - satria mihevitra izy ireo fa tena henjana izy io. Tsy ny famoronana fetra mametra ny hitazomana ny olona amin'ny lalany. Ny fahalalana ny misy ny zavatra, ny toerana tokony hisy, ny mety aminy. Ny momba ny fampidirana ny lisitr'ireo rehetra ary fametrahana azy ireo any amin'ny toerana azon'ny tsirairay idirana.
Kelsey Brogan, talen'ny fitantanana programa mitambatra ao amin'ny T-Mobile
Saingy tsy miantehitra amin'ny herin'ny fandresen-dahatra na ny fahazoana mandanjalanja ambony izy mba hampisy ekipa ao anaty sambo. Fa kosa, manampy ekipa iray izy hiova indray mandeha, ary avelany hiteny ho azy ireo ny tombony azo avy amin'ny fizotrany matanjaka kokoa. Raha vantany vao mahita ny tsy fitovian'ny fitantanana ny asa ataon'ny orinasa ny ekipa akaiky dia manomboka mihorakoraka haingana izy ireo mba ho anisan'izany. Ny fomba fijerin'i Kelsey dia porofo fa rehefa tantana tsara ny fanovana dia mivelatra sy mivelatra ara-nofo.
2. Ampiharo ireo modely amin'ny asa miverimberina
Ireo karazana famoronana dia mazàna mankahala ny asa miverimberina, tsy misy saina mihoatra ny maro. Afaho izy ireo amin'ny asa manahirana amin'ny alàlan'ny fampiharana modely na aiza na aiza misy dikany. Mampiasà teknolojia fitantanana asa orinasa hamoronana lisitry ny lahasa feno ho an'ny karazana tetik'asa samihafa, manome andraikitra ho azy ireo andraikitra ho an'ny asa, ary haminavina ny faharetany sy ny ora nomaniny ho an'ny faritra tsirairay aza. Izany dia mahatonga izany rehetra izany dingana maharary tsy hitan'ny zavatra noforoninao.
Ireo mpivarotra dia afaka miditra fotsiny ary mahita avy hatrany ny asa natokana ho azy ireo tsirairay. Ary ny mpitantana famoronana dia afaka mampiasa fitaovana fandrindrana loharanon-karena anatiny hanarahana ny fahafahan'ny tsirairay, fa tsy mila manao vinavina nahita fianarana na mandefa mailaka am-polony hamantatra hoe iza no manam-potoana hanaovana inona.
3. manao veloma ny sticky Notes
Ny zavatra tsotsotra toa ny fanalefahana ny kaonty fampiasanao, izay mametraka ny dingana ho an'ny sisa amin'ny tetikasa, dia afaka mitondra fiovana lehibe amin'ny fizotranao amin'ny famoronana ankapobeny. Atombohy amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny fangatahana asa rehetra dia natolotra tamin'ny fomba mitovy — fa tsy tamin'ny alàlan'ny mailaka, naoty na hafatra fohy. Azonao atao ny manangana endrika Google izay mipetaka amin'ny takelaka afovoany na, tsara kokoa aza, manararaotra ny asan'ny fangatahana asa ao amin'ny sehatra fitantanana ny asa ataon'ny orinasao.
4. Esory ny fanaintainana amin'ny porofo
Raha toa ianao ka misafidy sombin-javatra iray amin'ny famoronana hanamafisana sy handaminana fotsiny, ny fanaporofoana no mety handresy ny fo sy ny sain'ny ekipa mpamorona anao. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fanamarinana dizitaly, azonao atao ny manafoana ireo rojo mailaka tsy voaroy, hevitra mifanipaka ary fikorontanan'ny kinova Ny famoronana sy ny mpitantana ny fifamoivoizana dia afaka mahita mora foana hoe iza no namaly ary iza no tsy, mampihena be ny filàna manenjika ireo mpandray anjara na mangataka valiny.
Ho an'ny isa bonus, ampio fitantanana fananana nomerika (DAM) amin'ny fitaovana fampiasanao. Ny mpivarotra rehetra dia hankasitraka ny fidirana eo noho eo amin'ny kinova farany nankatoavin'ny fananana nankatoavina, izay azon'izy ireo atao ny manova ny habeny sy manondrana amin'ny endrika ilainy, nefa tsy mandalo mpiandry vavahady mpamorona sary. Alao an-tsaina ny fijerin'ny endrik'ireo mpamorona anao rehefa mandre izy ireo fa tsy mila mandefa mailaka an'olona jpg na fotsy intsony amin'ny logo an'ny orinasa intsony.
5. Asao ny fidiran'ny tsirairay
Isaky ny manova ny fizotran'ny efa misy ianao — na manova fanovana nomerika tanteraka ianao na mampihatra fanavaozana ny dalam-piasa kendrena — manasa fidirana amin'ireo izay hahatsapa ny fiantraikan'ny fanovana indrindra. Na dia mety manana mpitantana ny rafitra na manam-pahaizana momba ny fitantanana tetikasa manao asa-tanana amin'ny famakafakana ny fizotran'asa aza ianao, ny firaketana an-tsoratra ny dingana, ary ny fananganana ny modely, alao antoka fa tafiditra ao anatin'izay dingana rehetra ireo famoronana izay antenaina hanaraka ny fizotrany. ny fomba.
Omeo fotoana mety ny Process
Efa henonao ny ohabolana taloha fa tokony tsy ho hita ny endrika tsara. Ny fizotran'ny asa dia tokony hiasa amin'ny fomba mitovy. Rehefa miasa tsara izy ireo dia zara raha ho hitanao. Tsy tokony hahatsapa ho manakorontana na manelingelina na mankaleo izy ireo. Tokony hanohana mangingina tsy hita maso ny asa tokony hatao izy ireo.
Ary zavatra mahatsikaiky iray no mitranga rehefa miaina fomba fiasa toy izany ny karazana famoronana - ny fanoherany ny firesahana ny firafitra sy ny fizotran'ny asa rehetra nefa manjavona. Tsapan'izy ireo vetivety fa ny fizotran'ny nomerika voavolavola tsara dia mihoatra ny famotsorana azy ireo amin'ny asa be atao sy ny asa miverimberina. Manome hery azy ireo ihany koa izy ireo amin'ny fandefasana asa avo lenta haingana kokoa sy tsy tapaka, mitaky fotoana hanaovana famoronana sy fanavaozana ary mandany bebe kokoa isan'andro amin'ny fanaovana ny asa nanakaramana azy ireo.
Tags: dingana famoronanatohodranon'ifiaraha-miasa amin'ny famolavolanamodely laminafanandramana nomerikakelsey broganfanamarihana kelyt-finday
Heidi no Lehiben'ny varotra Workfront. Heidi dia mpitarika ambony mpanatanteraka zokiolona avo lenta sy manam-pahaizana ary manana traikefa mihoatra ny roapolo taona amin'ny famolavolana sy fanatanterahana ny paikadim-barotra sy marketing izay mitarika fitomboana.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny vidin'ny tsena amin'ny fotoana tena tsara ny fahombiazan'ny orinasa